Xa umntwana wakho eqala ukufumana isibambiso kwiindinyaniso zakhe zokuphindaphinda, lixesha lokuqala ukujonga umsebenzi ongezantsi wokuphindaphinda - ukwahlula.
Ukuba umntwana wakho uthembele ekuzileni amaxesha akhe amacwecwe, ngoko ukwahlukana kungaze kube lula kuye, kodwa uya kusadingeka azenze. Amageyimu afanayo amakhadi odlala ngawo ukwenza ukuphindaphinda angaguquleka ukuze asebenzise isahlulo ngokunjalo.
Oko Umntwana Wakho Uya Kukufunda (okanye Usebenzise)
Umntwana wakho uya kwenza ulwahlulo olulinganayo, ukwahlukana kunye nabasalayo, kunye nokuqhathaniswa kwenani.
Uzakufuna ipakethi yamakhadi kunye okanye ngaphandle kwamakhadi ebuso
Umdlalo weKhadi: I-Second-Player Division Division
Lo mdlalo uyintlukwano yemidlalo yamakhondo eklasi, nangona, ngenjongo yalo msebenzi wokufunda, uya kutshintsha emininzi kwimithetho yangaphambili yomdlalo.
Ngokomzekelo, esikhundleni sokucela umntwana wakho ukuba akhumbule inani lenani lamakhadi ebuso, kulula ukubeka iteksi elincinci le-tape ekhutshweyo (i-masking tape okanye i-tape yomdwebi osebenza kakuhle) ekhoneni eliphezulu lekhadi enexabiso lenani elibhalwe . Ixabiso lifanele linikezelwe ngale ndlela ilandelayo: Ace = 1, King = 12, u-Queen = 12, kunye noJack = 11.
Faka iikhadi zobuso emva kwidonki, udibanise uze udibanise amakhadi ngokulinganayo uze ubhekane phakathi kwabadlali.
Kwi "Ulungele, setha, hamba!" kubalwa, umdlali ngamnye ujika ngaphezulu kwamakhadi amabini.
Bobabini abadlali bangasebenzisa nawaphi na amakhadi amane abonakalayo ukuze bazame ukufumana intsapho yokwenene abanokuyenza kuyo ngokulandelelana ukuze benze inkathazo yokwahlukana. Umzekelo, ukuba uMdlali Omnye ubonakalise i-5 kunye ne-3, kwaye uMdlali weBili ujikelele uKumkani (12) kunye no-4, nokuba umdlali angabamba i-4, 3, kunye noKumkani ukwenza izivakalisi zesahlulo: uKumkani ÷ 4 = 3 okanye uKumkani ÷ 3 = 4.
Umphumeleli wesandla ngumdlali wokuqala okwazi ukuqonda nokubeka ingxaki yecandelo. Ngokuqinisekileyo, omnye umdlali angahlola kuqala imathematika!
Umdlali ngamnye kufuneka abuyisele amakhadi akhe angabonakali kwaye aqale "inqwaba" engasetshenziswanga. Njengoko umdlalo uyaqhubeka, umdlali ngamnye uphendukela kumakhadi amatshini amabini kunye namakhadi kwindawo yakhe engasetshenziswanga. Oku kunika ithuba elingakumbi kubadlali ukudala iingxaki zenkcazo. Ukuba ngaba badlali bobabini bangenza ingxaki ngokusebenzisa amakhadi ahlukeneyo, bobabili bawubamba ngesandla.
Umdlalo uphelile xa kungekho namakhadi aseleyo, okanye abadlali abakwazi ukwenza nayiphi na ingxaki yecandelo.
Umdlalo weKhadi: Ulwahlulo Hamba iNdoba
Icandelo ukuya kumdlalo wekhadi leentlanzi lidlalwa phantse ngokufanayo ngendlela efanayo nokuphindaphinda umdlalo wekhadi leentlanzi. Umahluko kukuba esikhundleni sokudala inkinga yokuphindaphinda ukunika ixabiso lekhadi, abadlali kufuneka bafikelele kwingxaki yokwahlukana.
Umzekelo, umdlali ofuna ukufumana umdlalo wakhe 8 unokuthi "Ngaba unayo i-16 ehlukaniswe ngama-2?" okanye "Ndifuna ikhadi eli-24 elahlulwe ngu-3."
Yenza amakhadi ayisithandathu kumdlali ngamnye kwaye ubeke yonke ipakethe phakathi phakathi njengenqwaba yokudweba.
Xa umdlali wokuqala echaza isigwebo sakhe sematriki, umdlali oceliwe ukuba enze ikhadi, kufuneka ayenze impendulo echanekileyo kwaye anikezele ngamakhadi afanayo. Ukuba akukho minganiso, umdlali wokuqala udonsa ikhadi ukusuka kwindawo.
Xa umdlali ephuma kumakhadi okanye umgca wokudweba usukile, umdlalo uphele. Ophumeleleyo ngumdlali onomdla kakhulu.
Yintoni i-Screwball Comedy?
Yonke Ngokuphathelele Inyosi Yomdwebi (iGenus Xylocopa)
Iimfihlelo ezili-10 zokuPhumelela njengomFundi oMdala
Imvelaphi kunye nokuhla kweMapal States
Ukukhupha iiFilimu zeeNtsapho
Zizityebi kangakanani ngabaPhicothi boMongameli base-2016?
I-NASCAR Race And Length Length
I-Google Earth kunye ne-Archeology
I-Ka'aba: I-Focal Point yoNqulo lweSilamsi
Ummakishi: Yintoni (okanye Ubani) Ngaba, kwaye Ziziphi iimfanelo?
Ibali leKrisimesi yeBulumko amadoda (i-Magi) kunye neNgqumbo emangalisayo
IiNkundla zeMidlalo zaseNew York zeBhola
UMthetho weSixeko soPhumlo